Umdlalo Wengqathu – The Ulwazi Programme
Ingqathu umdlalo odlalwa yizingane zamantombazane isikhathi esiningi kodwa nezabafana seziyawudlala manje lomdlalo. Udlalwa ngabantu abathathu noma ngaphezulu. Ingqathu yakhiwa ngohlobo lotshani olubizwa ngengongoni noma isikhonko. Kukhethwa lolutshani ngoba luqinile futhi intambo ihlala isikhathi eside. Lolutshani luyalukwa ngamantombazane, uma eseqedile kubalulekile ukuthi baqale bayicwilise isikhashana emanzini abandayo ukuze iqine bese bedlala ngayo imanzi ukuze ibe nomfutho ngesikhathi beyishaya. Njalo ngemuva kokudlala kufanele bayicwilise emanzini, ukwenzela ukuthi ihlale iqinile inganqamuki. Esinye sezizathu zokunakekelwa kwalentambo yabo ukuthi uhlobo lotshani eyenziwa ngayo alutholakali kalula futhi luqinile, okuthatha isikhathi eside ukuyiluka.
Lomdlalo udlalwa noma yinini uma izingane zithola isikhathi. Umuntu odlala ingqathu kufanele abe nobuciko ngoba kusuke kudlalelwa ukubona ingqwele. Ngesinye isikhathi izingane ziyahlukanisana ngamaqembu ukuze kubonakale ukuthi yiliphi elikwaziyo noma elizophumelela. Kanjalo nalabo abasuke beshaya intambo kufanele kube ngabantu abakwaziyo ukuyishaya bangasheshi ukukhathala ngoba lokho kungenza iqembu labo lihlulwe.
Kuningi izingane ezikwenzayo ukwenza lomdlalo uthakaselwe njengokucula ngesikhathi zidlala. Iculo ngalinye lihambisana nendlela enobuciko ekudlalwa ngayo. Lapha ngezansi sinamaculo asetshenziswayo uma izingane zidlala lemidlalo yazo. Amaculo abawasebenzisayo umuntu ngamunye uma esedlala ulandela iculo lize liphele kodwa ngesinye isikhathi umuntu udlala adedele omunye bashintshane iculo lize liphele. Isikhathi esiningi umuntu ungena ngayedwa entanjeni uma sekuyithuba lakhe lokudlala, kodwa ziningi izinto asebezishintshile ngoba seziyakwazi nokuthi zingene entanjeni zingaphezu kwezimbili kodwa lendlela yokudlala idinga ubuciko obukhulu.
Umvakash’ uyavakash’ zigangen’
Indlovukaz’ ithwel’ umqhele
Hhu mekle! Mekle
“One, two, three helele”, kulokhu kuphindaphindwa kanjalo. Kuleliculo lowo odlalayo udlala izikhathi ezintathu kuthi lapho sekuthiwa “helele” kufanele aphume kungene omunye ngokushintshana. Kubalulekile kulabo abashaya intambo ukuthi baqinisekise ukuthi intambo bayimise phezulu ukuze umuntu uma ephuma entanjeni angakhubeki alimale.
One, two amashigoshi, shigoshi
One, two ama push back, push back
One, two back side, back side
One, two ama inside, inside
One, two amahlala phansi, hlala phansi
Ngesikhathi kushiwo leliculo: “One, two” losentanjeni uyagxuma kabili. Uma sekuthiwa “Shigoshi” akasagxumi intambo ishaye ezinyaweni kuye ayeqe ngobuciko bakhona. Kuqhutshekwe neculo njalo uma sekufikwa lapho lishintsha khona wenza lokho okushiwo yiculo lize liphele. Ngokuhlukana kwezindawo lomdlalo uyehluka ngendlela odlalwa ngayo nangendlela amaculo abawacula ngayo.
Skipping rope is a game played by boys and girls.
Categories Culture Tags Imidlalo yomdabu, indigenous games, ingqathu